के गर्दैछन कारागारमा गोरे ? - Merodesh.news
के गर्दैछन कारागारमा गोरे ?
कारगारमा सुरुमा अतालिएजस्तो देखिएका गोरे विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको जेलर संकरप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए ।
सनम शाक्य हत्या अभियोग सँगै खुलेको करिव ३८ कुइन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी चुडामणि उप्रेती गोरे कारागार चलान भएको तीन दिन भएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका ६३ आरोपी मध्ये गोरे सहित २९ जना पूर्पक्षकालागि थुनामा छन् ।
आइतवार जिल्ला कारागार मोरङ चलान भएका उप्रेती सामान्य दैनिकीमा फर्कन थालेका छन् । कारगारमा सुरुमा अतालिएजस्तो देखिएका गोरे विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको जेलर संकरप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोरे कारागारमा सामान्य मानिसस“ग घुलमिल हुन थालेका छन् ।
तस्करी र हत्या प्रकरणका आरोपी उप्रेती गत मंगलवार पक्राउ परेका थिए । गत बुधवारदेखि जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहस पछि उनी आइतवार पूपक्र्षकालागि जिल्ला कारागार मोरङ चलान भएका थिए ।
सोही मुद्धाका अन्य २८ आरोपी क्षेत्रिय कारागार झुम्कामा छन् । झुम्कामा एसएसपी दिवेश लोहनी र पाच प्रहरी सहित १४ जना ब्लक २ मा छन भने अन्य १४ जना ब्लक १ मा छन् ।